Karazana fanjanahana: toetra sy vokany ratsy | Fanavaozana maintso
Misy karazany maro ny zavamaniry sy ny biby manana hery manafika be dia be. Fantatra amin'ny anarana hoe karazana mpanjanaka na karazana manafika. Ireo no nampidirina ho azy, tsy fanahy iniana na fanahy iniana amina media izay tsy azy ireo. Aorian'ny fotoana fampifanarahana iray dia afaka mananjanaka ity tontolo ity izy ireo. Tsy mitovy ny antony ahafahanao mananjana faritra iray.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra, ny lanjany ary ny loza ateraky ny karazana mpanjanatany.
2 Biolojia ny karazana mpanjanatany
3 Fampidirana ireo karazana mpanjanatany
4 Fomba fifehezana ny karazana manafika
Ireo dia karazana nampidirina tamina tontolo izay tsy azy ireo ary afaka mampifanaraka azy ary miafara amin'ny fanjanahan-tany azy. Ny karazana mpanjanatany no antony faharoa mahatonga ny fahaverezan'ny zava-boary an'izao tontolo izao. Tokony ho ao an-tsaina fa ny olombelona dia nanerantany ny planeta ary misy ny hetsika avy amin'ny kaontinanta iray mankany amin'ny iray hafa isan'andro. Na ny fanahy an-tsitrapo na tsy fanahy iniana, karazana dia afaka miditra amin'ny tontolo iainana hafa.
Ny tontolo iainana vaovao tsy manana karazana biby mpiremby voajanahary ary mahay mampifanaraka ny toetrandro mety ho lasa karazana mpanjanaka izy io. Fantatra amin'ny anarana hoe karazana manafika koa izy ireo satria manafika ekosistia izay tsy azy ireo. Ilaina ny manavaka tsara ny karazany manafika amin'ny tsy tompon-tany. Ny karazana allochthonous dia ireo izay ampidirina an-tsitrapo fa tsy afaka manafika ekôzistia.
Manampy antsika hanakaiky ny toerana, ny kolontsaina ary ny olona ny fanatontoloana ary koa amin'ny karazam-biby sy zavamaniry izay mety hanimba ny zava-manan'aina. Ohatra, any Espana isika dia manana ny fampidirana ny fanarian-karena Azia goavambe izay mety hiteraka olana lehibe. Ireny fanenitra ireny dia iray amin'ireo loza mitatao amin'ny fahaveloman'ny karazam-borona sasany ao Espana.
Biolojia ny karazana mpanjanatany
Ny karazana fanjanahana dia ireo faritany hafa dia ampidirina ary tanterahina ny mampifanaraka, manangana, miteraka ary manaparitaka mandra-pahazony ny tontolo iainana iray manontolo. Raha vantany vao nanjanaka ny tontolo iainana izy ireo dia afaka mamorona mponina vaovao ary miteraka fiatraikany amin'ny harena voajanahary, fahasalamana na toekarena amin'ny faritra iray. Miresaka ny fiantraikany ara-toekarena isika satria maro amin'ireo karazan-tany mpanjanaka no misy akony lehibe amin'ny fambolena.
Ny ankamaroan'ny olana mety haterak'izy ireo dia avy amin'ny fihetsika mpiremby sy fisorohana ny fivoaran'ny karazan-jaza. Izy ireo koa dia afaka manova toerana onenana sy manova ny tany ara-batana sy simika. Izy ireo dia karazana izay mifaninana mifaninana amin'ireo karazana tera-tany ary mifaninana amin'ny sakafo sy ny habakabaka. Lafiny iray hafa amin'ny karazana mpanjanatany koa ny afaka mifangaro amin'ny karazana natiora izy ireo ary mampiditra parasy sy aretina vaovao.
Ny vokatry ny fanafihana biolojika dia azo jerena amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Ary moa ve maro amin'ireo karazana mpanjanatany no afaka mampiditra aretina, miteraka tsy fahazakana na manapoizina ny olombelona. Aza adino fa ny hery fiarovantsika dia nampiasaina koa tamin'ny fihaonana tamin'ny karazan-javamaniry sy karazam-borona ary tsy mahazaka azy ireo. Na izany aza, raha misy karazany vaovao miditra tampoka eo amin'ny tontolo iainantsika, maro ny hery fiarovan'ny vatana no mety tsy ho afaka hifanaraka amin'ireo karazan-javamaniry ireo ka hiteraka tsy fahazakana. Midika izany rehetra izany fa ny fiatraikany amin'ny toekarena dia mety hanjary hiavaka ary hiteraka fihenan'ny fihoaram-pefy toy ny fiompiana, fambolena, asa jono ary fahasimban'ny indostrian'ny fizahantany, ankoatry ny hafa.
Tadidio fa tsy ny karazana mpanjanaka rehetra no manafika. Ny sasany tsy mahay mizatra amin'ny tontolo iainana na mitobaka amin'ny fahalalahana. Ohatra, misy biby fiompy sy zavamaniry maro izay tsy mampidi-doza amin'ny ambin'ny faritany na eo aza ny fampidirana ekosistia hafa ankoatry ny azy. Ny sasany ary mahavita manamboatra sy manitatra nefa tsy manimba ny tontolo iainana toy ny ovy sy katsaka. Amin'izany fomba izany dia azo ovaina izy ireo ho lasa karazan-karazany efa miorina.
Fampidirana ireo karazana mpanjanatany
Ho hitantsika ny fomba fampidirana ireo karazana mpanjanatany amin'ny toerana hafa sy ny ekosistia hafa tsy mitovy amin'ny azy. Izy ireo dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny fidiran'ny olombelona, ​​na fanahy iniana izany na tsia, ary amin'ny alàlan'ny tranga voajanahary. Handinika amin'ny antsipiriany ny sasany amin'ny fepetra mety indrindra amin'ny fampidirana ireo karazana mpanjanatany isika:
Varotra varimbazaha: maro amin'ireo karazan-tany mpanjanatany no ampidirina amin'ny tontolo iainana hafa amin'ny alàlan'ny fividianana sy fivarotana zava-maniry sy biby any ivelany. Io no heverina ho antony lehibe ary heverina ho heloka bevava amin'ny fanondranana olona tsy ara-dalàna.
Fizahan-tany: Ny fitsidihana any amin'ny firenen-kafa dia mandray anjara amin'ny fanitarana ny karazana vazaha, na fanahy iniana izany na tsy fanahy iniana.
Fanjonoana jono sy fanatanjahantena: Ireo dia hetsika nampahafantatra ny biby toy ny Atlas mouflon sy ny trondro any amin'ny ankamaroan'ny Eropa.
Fitaterana ara-barotra iraisam-pirenena: ny fitoeran-tsambo misy ny sambo ara-barotra, ny vatan'ny sambo, ary ny fitoeran'ny fiaramanidina dia toerana ahafahan'ny karazana mpanjanatany miditra tanteraka.
Famotsorana biby: Lafin-javatra iray lehibe hafa koa ny fiheverana amin'ny fanitarana ireo karazan'olona tsy tompon-tany amin'ny faritra hafa. Ohatra, ny parakeet, raccoon, ary ny sokatra Florida dia ohatry ny biby mpiara-dia hafakely izay tonga nanjanaka tontolo iainana rehefa nilaozan'ny tompony na nitsoaka.
Volo sy voly: ny lamaody sy ny fambolena dia vavahady ho an'ny biby mampinono sasany toy ny mink amerikana any Eropa sy ny zavamaniry sasany toy ny nopal avy any Las Tunas any Afrika sy Oseania.
Fomba fifehezana ny karazana manafika
Fantatsika fa ny fampidirana ireo karazana ireo dia misy fiatraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainana. Mety hisy fiantraikany amin'ny fiarovana ara-tsakafo sy ny fifehezana ny aretina ary amin'ny toekaren'ny firenena koa izany. 33.500 miliara dolara no very isan-taona amin'ireo karazana mpanjanatany.
Mba hifehezana ny fanitarana ireo karazana ireo dia tsy maintsy aroso ny paikady samihafa mba handinihana ireo teboka rehetra ireo:
Fitsipika mandrara ny fanafarana karazana hafakely.
Fisorohana amin'ny fiambenana bebe kokoa amin'ny làlana hidirany.
Famaritana haingana sy valiny mba hisorohana ny karazana vorona tsy mampiorina azy.
Famongorana ireo karazana manafika izay nahavita nitatra.
Fanaraha-maso ny bibikely amin'ireo tranga izay tsy ahafahana mamongotra.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny karazana mpanjanatany sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Karazana fanjanahana